Wadamada Muslimiintu jawaab maka bixin doonaan Trump oo Yuhuuda Al-Qudus u aqoonsanaya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wadamada Muslimiintu jawaab maka bixin doonaan Trump oo Yuhuuda Al-Qudus u aqoonsanaya
Wadamada Muslimiintu jawaab maka bixin doonaan Trump oo Yuhuuda Al-Qudus u aqoonsanaya. Al-Qudus waa magaalada sadexaad ee ugu barakaysan aragtida Muslimiinta.
Waa halkii rasuulkeena SCW looga dhoofiyay samada kadibna RABIGEEN soo faray shanta salaadood ee hadda inagu waajibka ah. AL-Qudus waxay leedahay taariikh cad oo Muslimiintu yaqaanaaan.
Jawaabta suaasha ayaa noqonaysa haa way ka bixin karaan jawaab dhegaha goysa oo ku haboon cunsuri jaahila sida Trump oo kale ah waxaadse iswaydiin kartaa maxaa horjooga.
Ilaa hadda wadamada Muslimiintu waa ay muujiyeen mowqifkooda ku aadan Al-Qudus haba u muujiyaan si diciifnimo ah sida Sucuudiga oo kale ama si adag sida Turkiga oo kale.
Hadaba maxaa hor taagan inay jawaab ku haboon siiyaan ama uga aargoostaan siyaabo kale. Maraykanka oo Sucuudiga adeegsanaya wuxuu burburiyay Ciraaq iyo Suuriya. Waxana halkaa ka baxay laba wadan oo khalkhal ku hayay Yuhuuda.
Sida ugu haboon
Muslimiintu waxay leeyihiin laba urur mid Carbeed oo bilaa ilko ah iyo midka weyn ee Muslimiinta oo dhan ka dhexeeya. Waxay iyagoo mida soo saari karaan cunaqabatayn ka dhana Maraykanka oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo amniga.
Waa talaabo dhegaha goynaysa cunsuri Trump oo aanu ka soo kabsan Karin. Dhaqaalaha Maraykanku wuxuu siyaabo kala duwan ugu xiran yahay wadamada Muslimiinta.
Ma samayn karaan oo waa ururo bilaa ilko ah oo magac u yaala sida kan Carbeed oo Sucuudigu yahay saaxiibka koowaad ee Yuhuuda iyo Maraykanka.
Waxa markaas soo haray dhowr wadan sida Turkiga oo kale oo iyagu balaariyay siyaasadooda si toosana ugu xirneyn Trump.
Wadamada MAYA oran kara Trump xiriirkana u goyn kara waxa ka mida Iiraan, Turkiga, wadamada Muslimiinta ee ka soo go’ay Ruushkii hore, Indooniisiya, iyo Malaysiya inkastoo labadan wadan ee dambe si gaara ugu xiran yihin Maraykanka.
Wadamada aan MAYA oran Karin laakiin laba afleeya ee Maraykanku gacanta ku hayo waxa ka mida Sucuudiga, Masar oo gaaja ah, Carabta kale oo dhan, Bakistaan oo awood Nukliyeer haysata hadana baqaysa, Muslimiinta Afrika kuma jiraan go’aan qaadashada.
Waxa kor kaaga muuqda sida xaalka Muslimiintu yahay laakiin haday MID noqdaan leh awood wax cabin karta xataa ku qasbi kara Yuhuuda inay is dhiibto.
Wixii aan sugnaaba waa cunsuri Trump oo yeela siduu jecelyahay laakiin maaha wax marnaba Muslimiintu aqbalayaan xataa haddii Carabta Trump ku xiran ogoshahay.